सुन तोलाको रु. १ लाख पुग्नै लाग्यो, आज फेरि रेकर्ड ब्रेक
काठमाण्डौ । सुनको भाउ निरन्तर उकालो लाग्ने क्रमले यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ बढ्दै हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आइतबार प्रतितोला फाइन गोल्ड ९९ हजार ६०० रुपैयाँ तेजाबी गोल्ड ९९ हजार १६० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत...
काठमाण्डौ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ दिनदिनै बढ्दै प्रतितोला १ लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। यो साता कारोबारको अन्तिम दिन पनि सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९९ हजार ३०० रुपैयाँ तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ८६५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यो मूल्य नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च हो। हिजो बिहीबार पनि सुनको भाउ...
काठमाण्डौ । नेपाल बजारमा आज बिहीबार सुनको भाउले फेरि रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा ५०० रुपैयाँ बढ्दै सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९९ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ५६० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार तोलामा ३०० रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ आज बुधबार थप नयाँ उचाइमा पुगेको छ। यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ बढ्दै नयाँ उचाइमा पुगेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ५०० रुैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ६५ रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो भाउ नेपालकै इतिहासमा...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलकै १ लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। पछिल्ला केही दिनयता सुनको भाउमा उछाल आएसँगै तोलकै १ लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको हो। यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार तोलामै १ हजार २०० रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको छ। यो भाउ...
सुनको भाउमा फेरि रेकर्ड ब्रेक, हालसम्मकै सर्वाधिक मूल्य
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढ्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ५०० रुपैयाँ बढ्दै सुनको भाउ सर्वाधिक उचाइमा पुगेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आइतबार प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ८६० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत...
सुनको भाउमा उछाल, तोलाकै रु. ९६ हजारनजिक
काठमाण्डौ। यो साता नेपाली बजारमा सुनको भाउमा उछाल आएको छ। यो साताभरि मात्रै सुनको भाउमा ३.९० प्रतिशतले उछाल आएको हो। साताभरि सुनको भाउमा ३ हजार ८०० रुपैयाँ बढेको छ। गत साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुन तोलाको ९२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुन तोलाको ९५ हजार ८०० रुपैयाँ पुगेको...
काठमाण्डौ। नेपाली बजारमा सुनको भाउमा दिनदिनै उछाल आउन थालेको छ। आज बिहीबार पनि सुनको भाउ बढ्दै नयाँ उचाइमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदीव्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। यो...
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको भाउ फेरि रेकर्ड ब्रेक गर्दै हालसम्म उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउ तोलामै १ हजार ३०० रुपैयाँ बढ्दै नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक उचाइमा पुगेको हो। यो बढोत्तरीसँगै बुधबार प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको भाउ फेरि बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँ बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै मंगलबार प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार २६० रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालकै इतिहासमा सुनको सर्वाधिक दोस्रो उच्च भाउ पनि ...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार सुनको भाउ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँ घटेको हो। यो गिरावटसँगै सोमबार प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९१ हजार ८६५ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो आइतबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला...
सुनको भाउ फेरि बढ्यो, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउमा वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ६५ रुपैयाँको उचाइमा पुगेको छ। गत साता कारोबारको अन्तिम दिन सुनको भाउ तोलामै...
काठमाण्डौ । यो साता कोरोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको भाउमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९१ हजार ७६० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार पनि सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँ...